Kheladi - ‘गोल्डेन ब्वाइ’ बेकरको पतन
लन्डन । अचेल बोरिस बेकरबारे जति पनि सुन्न पाइन्छ, त्यसले कानमात्र पाक्ने गर्छ । कुनै समय उनी विश्व टेनिसका ‘गोल्डेन ब्वाइ’ थिए, आजभोलि ‘ब्याड ब्वाइ’ भएका छन् । फेरि कसैले सोध्न सक्छ, को हुन् यी बोरिस बेकर ? यदि कसैले यो प्रश्न गर्छ भने सिधै भने हुन्छ, तिनलाई टेनिसबारे केही पनि थाहा छैन । सन् ८० देखि ९० को दशकबीच जर्मनीका यी टेनिस खेलाडी खुबै चम्किए । आँखीभुइँसम्म पनि खैरो रहेका यी बेकरको टेनिस आफ्नो समय उत्कर्षमा थियो ।
अहिले उनी लगभग लुकिछिपी हिँड्नुपर्ने स्थितिमा छन् । टाट पल्टेर कहीं कतैको नभएको त अब उनीबारे नयाँ रहेन । तर उनी खासमा ठ्याक्कै टाट पल्टेका पनि थिएनन् । टाट पल्टेको नाटक गरेका पो रहेछन् । खासमा आफूले लिएको ऋण र कर तिर्नुपर्ला भनेर । उनको गोप्य आर्थिक स्रोतबारे थाहा पाएपछि लन्डन अदालतले उनलाई हालै मात्र जेल सजाय पनि तोकेको छ । त्यो भनेको आर्थिक रूपमा उनी बदमास रहेछन्, व्यक्तिगत आचरणमा बदमास रहेको त यसअघि नै सबैलाई थाहा थियो ।
धेरै अगाडि सन् १९८५ को जुलाईतिर मात्र फर्कौं । त्यतिबेला भर्खर १७ वर्षका बेकरले सारा विश्वजगतलाई आश्चर्यमा पार्दै विम्बल्डन टेनिसको उपाधि जिते । अब भनिरहनुपर्दैन, चार ग्रान्ड स्लाममध्ये पनि सबैभन्दा ठूलो विम्बल्डन जितेपछि उनको कति धेरै चर्चा भएको थियो होला त्यतिबेला । उनी विम्बल्डनका सबैभन्दा कान्छा विजेता मात्र बनेनन्, विनावरीयता अल इंग्ल्यान्ड क्लबको यो बहुत प्रतिष्ठित उपाधि जित्ने पहिलो खेलाडी पनि बने ।
खेलाडीका रूपमा उनले सबैबाट हाइ हाइ नै कमाए । खेलेर नै उनले अकुत सम्पत्ति कमाए । तर सन् १९९९ मा संन्यास लिएयता उनको पतन सुरु भयो । खेल्न के छाडे कमाइको मुहान पनि सुक्न थाल्यो । तर उनको खर्च उस्तै थियो अनियन्त्रित । यसको एउटा कारण उनको घरमा श्रीमती त थियो नै । बाहिर अन्यसँग पनि अफेयर चलाइरहेका हुन्थे उनी । यसक्रममा उनको पत्नी बारबरासँग पारपाचुके भयो । यो सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियामा उनले राम्रै रकम गुमाए ।
त्यसको ३७ वर्षपछि लन्डनकै एउटा अदालतले उनलाई साढे २ वर्षको जेल सजाय सुनायो । सन् २०१७ मा बेकरले आफूलाई टाट पल्टेको घोषणा गरेका थिए, त्यतिबेला उनले तिर्न बाँकी रकम मात्रै ५ करोड पाउन्ड बराबर थियो । सन् २०१२ यता उनी जर्मनी छाडेर लन्डनमै बसिरहेका थिए । उनले छपल्ट ग्रान्ड स्लाम उपाधि जिते । आफ्नो खेलजीवनको उत्कर्षमा ‘बुम–बुम’ उपनाम पाए । किनभने उनको सर्भिस निकै कडा हुने गथ्र्यो ।
त्यही बेलातिर लन्डनको एक रेस्टुरेन्टमा बेकरका एक रुसी मोडलसँग निकै छोटो समयका लागि भेट भएको थियो । यही बेला पनि उनी ती महिलासँग शारीरिक सम्बन्धमा रहे । नतिजा उनी ती महिलाबाट एक छोरीका पिता बने । आम्दानी केही थिएन, तर उनको रवाफ र बानीबेहोरा उस्तै थियो । कमाउन पो गाह्रो, खर्च गर्न कहाँ गाह्रो छ र ? पछि बेकर ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्नेसम्मका भए । अनि रचियो टेनिसका यी ‘गोल्डेन ब्वाइ’ बेकरको पतनको कथा ।